[# T-Legend] (၁ နာရီ) ခရီးသွားခြင်းအတွက်နောက်တစ်ခေါက်ခရီးသွားခြင်းကရယ်စရာကောင်းပြီးထွက်ပြေးသည်။ Hunminjeongeum 🤣 Hodong ဟာနိုင်ငံခြားစကားလုံးပါ၊ ငါဒီမှာပါ !! | အနောက်နိုင်ငံများသို့ #New ခရီးစဉ် #Diggle
#Tigend # ခရီးသစ်သို့သွားရန် ၈ #Diggle #Diggle ဒဏ္legာရီ
များဖြစ်လာသည့် အားလုံး - အချိန် မြင်ကွင်းများ ..
မမေးဘဲမေးမြန်းခြင်းမရှိဘဲ N ဇာတ်လမ်းများကိုသွားကစားကြစို့။
☞ https://www.youtube.com/c/tvNDENT သို့စာရင်းသွင်းပါ
[#Legend] OB VS YB Recipe လူရွှင်တော်စပ်သောသွေးထွက်သံယိုတိုက်ပွဲ Football (ဘောလုံး၊ ခန္ဓာကိုယ်ပဟေQuိ) | အနောက်နိုင်ငံများသို့ #New ခရီးစဉ် #Diggle
(ENG SUB) RUNNINGMAN လီ KWANGSOO.zip
[#Tegen] (၁ နာရီ) သင်အသက်ရှင်ရန်ဝှက်ရန်လိုအပ်သည်။ ဤအချိန်တွင်ကြီးမားသောအရွယ်အစားရှိသည့်အနောက် Legend Wake-up မစ်ရှင် keke Minho Song သို့ခရီးစဉ်keke🎃 | အနောက်နိုင်ငံများသို့ #New ခရီးစဉ် #Diggle
နောက်ထပ် ၂ ပတ်
[#Add shot] အရာရာတိုင်းဖြစ်ပျက်ခဲ့သလား။ နဂါးဘုရင် Eun Ji-won ၏ဆန္ဒသည်ဇယားများကိုဇောက်ထိုးလှန်ပစ်လိုက်သည်။ နောက်ဆုံးတော့ငါမဟောင်းရုံသာကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်နေကြတယ်ဆိုတာမမြင်ရဘူး။ | အနောက်နိုင်ငံများသို့ #New ခရီးစဉ် #Diggle | CJ ENM 201204 အသံလွှင့်
[အနောက်တိုင်းသို့အသစ်သောခရီးစဉ် ၈] Harmonica + Tickle ခံနိုင်ရည် - ချိုမြသောညနေခင်းဂိမ်းအပြည့်အစုံ! Song Min-ho အားတစ်ချက်တည်းဖြင့်ဖျက်ဆီးသော Ding Dong သည်မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်! #Keynote #Diggle | CJ ENM 201009 အသံလွှင့်
[ENG SUB - Infinite Challenge] မူဟန်ကုမ္ပဏီ (၁) # ၂၂၀၂၀၂၀၂၉
[#Tigend] (ဖျက်ဆီးခြင်းစိတ်ခံစားမှု) ကျွန်ုပ်၏အားနည်းချက်များကို ၀ န်ချတောင်းပန်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ဘာကြောင့်ဂိမ်းဆူညံသံဖြစ်လာသနည်း။ ^^ ကျွန်ုပ်အတွက်အဖြေမှာခြွင်းချက်မရှိအဖြေဖြစ်ပါသည် | အနောက်နိုင်ငံများသို့ #New ခရီးစဉ် #Diggle | CJ ENM 201113 အသံလွှင့်
[# T-Legend] အနောက်တိုင်းသို့ခရီးစဉ်သို့ထွက်ခွာရန်နှင့်စောင့်ကြည့်နေသောလေးအက္ခရာပါပဟေquိဒဏ္endာရီသစ်😂😂 answer မှားယွင်းသောအဖြေကိုရရန်အဆင်ပြေသည်။ အနောက်နိုင်ငံများသို့ #New ခရီးစဉ် #Diggle | CJ ENM 191220 အသံလွှင့်
ကိုရီးယား Patched Joker ၏ရုပ်ရှင်လိုင်းများသည်ဆက်ပြောသည်။ Journey7to New Journey tvNbros7 EP.10
a လှည့်ကွက်မဟုတ်ပါ 60 အချင်း ၆၀ စင်တီမီတာ၊ Hodong Kang အရွယ်အစား (feat Kyuhyun ၏အဆင့်မြင့်ကျွမ်းကျင်မှု) [Bob Gorism] | သတိပြုပါ။ The Bob စတူဒီယို
[Infinite Challenge] မေး။ ကိုလံဘီယာ၏မြို့တော်? Che A. Che Guevara😊 Haha Okhotsk ပင်လယ်အထူးအပိုင်း (၂) ။
[#Tegend] Jo Kyu-hyun X Eun Ji-won ၏နှစ်သစ်ကူး (သူတောင်းစား) သည် P.O အားမီးလောင်စေခဲ့သည် haha ​​ငါ Jo သည်အဘယ်အရာဖြစ်သည်ကိုသိလိုပါ | 🤔 | အနောက်နိုင်ငံများသို့ #New ခရီးစဉ် #Diggle
[#Tegen] (၁ နာရီ) Kang ၏မီးဖိုချောင်တွင်တိုက်ပွဲမတိုင်မီငြိမ်းချမ်းစွာ (?) မြင်ကွင်းများစုဆောင်းခြင်း☺ Stella Stala Stella Bumpa (လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ငြိမ်းချမ်းရေးညှိနှိုင်းမှုအချိန်) 🎵 | # Kang's Kitchen2#Diggle
[June's Dance] မင်းဗိုက်ဆာနေရင်ဘာမှမရှိဘူး။ မုသားရှာဖွေစက်မှယူဆောင်လာမည့်အပြီးသတ်ကေကေကိန်း -“ The Hungry Special” အဆုံးမဲ့စိန်ခေါ်မှုနှင့်ဆင်တူသည်။
[#Tegen] 'မင်း D ကိုဆုံးရှုံးလိုက်ပြီ' ဒါကြောင့် Yoo-jin (feat ။ Baek ရဲ့ယောက္ခမ) ငါ့ကိုအသိအမှတ်မပြုတဲ့ Jo Kyu-hyun ㅋㅋ😱ရိုက်ကူးရေးစက်ဟာချက်ချင်းပဲသမ္မာသတိရှိလာ | အနောက်နိုင်ငံများသို့ #New ခရီးစဉ် #Diggle
(ENG / SPA / IND) ဒဏ္endာရီမီးပုံးပျံဖုတ်ကောင်အခန်း ၁ | NJTTW | ရောစပ်ပါ